iCopy3 စမတ်ကဒ်မိတ္တူစက်, iCopy3 IC / ID ကိုကတ်ဓါတ်လှေကား Card ကို Clone စက်ပစ္စည်း, iCopy3 စမတ်ကဒ် Clone စက်ပစ္စည်း, iCopy3 IC / ID ကိုကတ်ဓါတ်လှေကားကတ်မိတ္တူစက်
iCopy3 စမတ်ကဒ်မိတ္တူစက်, iCopy3 IC / ID ကိုကတ်ဓါတ်လှေကား Card ကို Clone စက်ပစ္စည်း
Password ကိုစမ်းသပ်ခြင်း Copy ကူးစက် iCopy3 IC / ID ကိုကတ်ဓါတ်လှေကား Card ကို Clone စက်ပစ္စည်း, iCopy3 IC / ID ကိုကတ်ဓါတ်လှေကားကတ်မိတ္တူစက်, iCopy3 ID ကိုကတ်မိတ္တူစက်, iCopy3 စမတ်ကဒ် Clone စက်ပစ္စည်း, iCopy3 စမတ်ကဒ်မိတ္တူစက်
ပံ့ပိုးမှုကိုယ်ပွား 13.56MHz encryption ကို IC ကဒ်, Anti-မိတ္တူ ID ကိုကဒ်နှင့် IC ကဒ်ထောက်ခံမှု!
input ဗို့: DC က 5V
standby ပါဝါစားသုံးမှု: 50uA
operating ပါဝါစားသုံးမှု: 120Ma
အရွယ်: 170× 60 × 31mm
ထုပ်ပိုး: အရောင်သေတ္တာ, ဟာ host အပါအဝင်, built-in လီသီယမ်ဘက်ထရီတစ်ဦး, တစ်ဦး lanyard, တစ်ဦးကို manual, တစ်ဦး Connect ကွန်ပျူတာဒေတာကေဘယ်လ်ကြိုး. လိုအပ်ချက်အားသွင်းဖို့လိုလျှင်, ဖုန်းကိုအားသွင်းကောက်ကျေးဇူးပြုပြီး!
iCopy3 စမတ်ကဒ်မိတ္တူစက်ကိုတိုက်ရိုက်အွန်လိုင်းအဆင့်မြှင့်, အစွမ်းထက်ကုဒ်ဖြုတ်! ပံ့ပိုးမှု ID ကိုကဒ် 125khz, 250kHz, 375kHz, 500kHz, 625kHz, 800kHz, 1000kHz ကိုဖတ်ရှုခြင်းနှင့်ကိုယ်ပွားရေးရန်.
ပံ့ပိုးမှု IC ကဒ် 13.56MHz encryption ကိုကဒ်ကိုယ်ပွား, Anti-မိတ္တူ ID ကိုကဒ်နှင့် IC ကဒ်ထောက်ခံမှု!
ကဒ် encrypt လုပ်ထားမဟုတ်ပါဘူးဘယ်အချိန်မှာ, တိုက်ရိုက်ကဒ်ကိုဖတ်, သက်ဆိုင်ရာအလွတ်ကဒ်ရေးရန်, စက်ကိုအောင်မြင်စွာတစ်ကဒ်ရေးသားဖို့လှုံ့ဆော်ပေးခဲ့တယ်.
စက် encryption ကိုကဒ်ကိုဖတ်သတိပေးခံရတဲ့အခါမှာ, သင်ကွန်ပျူတာနှင့်အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်ရန်လိုအပ်ပါတယ်, စက်ဆော့ဖျဝဲနှင့်တကွကြွလာဖွင့်လှစ်, Decrypt ကိုကလစ်နှိပ်ပါ, အသံသည်နှင့်အညီကတ်များရေးသားဖို့လှုံ့ဆော်ပေးခဲ့တယ်.
1. အပြည့်အဝ encrypt လုပ်ထား IC ကဒ်စာဝှက်ဖြည်: ပထမဦးဆုံးအပြည့်အဝဒီကုဒ်ဒါ function ကို, IC ကဒ်အောင်မြင်မှုများအပြည့်အဝစာဝှက်စနစ်ကာကွယ်ရေးလိုင်း, အသုံးပြုသူများအပြည့်အဝစာဝှက်စနစ်ကဒ်ကော်ပီကူးဖို့ detector သုံးစွဲဖို့မလိုအပ်ပါဘူး, မိတ္တူမြန်နှုန်း, ပိုပြီး encryption ကိုကတ်များကိုဖေါ်ထုတ်ဖို့နိုင်ပါတယ်.
2. မိုဃ်းတိမ်ကိုပလက်ဖောင်းအသိဉာဏ်အဆင့်မြှင့်: အသစ်တစ်ခုကိုအဆင့်မြှင့်ကိုအလိုအလျောက်အကြောင်းကြား.
3. Big data တွေကို password ကိုစာကြည့်တိုက်ဒီကုဒ်ဒါ: ကြီးမားတဲ့ data တွေကိုခွဲဝေမှုများအသုံးပြုမှု built-in password ကိုစာကြည့်တိုက်နည်းပညာ, အလိုအလျောက် password ကိုစာကြည့်တိုက်တွင်ထည့်သွင်းစာဝှက်ဖြည်အောင်မြင်သောကဒ် password ကို, သငျသညျကှနျယကျဒီကုဒ်ဒါမပါဘဲကဒ်၏တူညီသောအမျိုးအစား decrypt နောက်တစ်ကြိမ်, အလိုအလျောက် password ကို crack ဖို့.
4. အပြည့်အဝတီးဝိုင်းမှတ်ပုံတင်မိတ္တူ: တဦးတည်းကဒ် Dual-band, တဦးတည်းကဒ် Multi-အကြိမ်ရေအလိုအလျှောက်မှတ်ပုံတင်, အလိုအလျှောက်ဖတ်မိတ္တူ.
5. ပံ့ပိုးမှုမြှင့်တင်ရန် detector: အထူးကဒ် detect နှင့် decrypt နိုင်ပါတယ်, အတု password ကိုအလိုအလျှောက် filter.
6. အလိုအလျောက်ကတိကြုံး: 100KHz ထံမှ 13.56MHz မှ frequency ကိုအလိုအလျောက် increment သိမ်းကျုံး, အဆိုပါ offset အကြိမ်ရေကဒ်နိုင်အောင်, ဖုံးကွယ်ဖို့ဘယ်နေရာမှာ Non-စံကဒ်.
7. ဝေးလံခေါင်သီထိန်းချုပ်ရေး Copy ကူး: fixed ကုဒ်အမျိုးမျိုးကိုထောကျပံ့, လှိမ့်ကုဒ်, တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအကြိမ်ရေ, Non-စံကဒ်ကြိုးမဲ့အဝေးထိန်းမိတ္တူ (နောက်ပိုင်းမှာ version ကိုအဆင့်မြှင့်ထောက်ခံမှု)
8. အားလုံးစမတ်ကဒ်များကိုထောကျပံ့: ပံ့ပိုးမှု IC, Mifare 1k S50, Mifare S70 4K, ID ကို, TK4100, EM4100, EM4102, HID26, HID35, HID37, Geed64, GID50, GID40, GID32, GID16, SID64, SID50, SID40, SID32, 125kHz ~ 13.56MHz, အာရှတိုက်မှာစမတ်ကဒ်များကိုရာပေါင်းများစွာသော, ဥရောပ, အရှေ့တောင်အာရှ, အာဖရိကနှင့်သြစတြေးလျ. မိုဃ်းတိမ်ကိုပလက်ဖောင်းအဆင့်မြှင့်စမတ်ကဒ်များကိုပိုမိုအမျိုးအစားများကိုထောကျပံ့ပေးလိမ့်မယ်.
9. အလွတ်မိတ္တူကတ်များအမျိုးမျိုးများအတွက်ပံ့ပိုးမှု: UID, FUID, အပိုင်း, ZXUID, EUID, ICUID, E5500, E5550, T5557, T5567, T5577, EM4305, EL8265, 5200, 6200, 7200, 8200, 6608, 6609, 7325, 4366, 8348, 9523, 9534, ID435, 2346, စသည်တို့ကို. မိုဃ်းတိမ်ကိုပလက်ဖောင်းအဆင့်မြှင့်ပိုပြီးအမျိုးအစားများကိုထောကျပံ့ပေးလိမ့်မယ်.
10. အစားထိုးလီသီယမ်ဘက်ထရီ. အားပြန်သွင်းနိုင်လီသီယမ်ဘက်ထရီ, ရရှိနိုင်ဘက်ထရီ, ရရှိနိုင်ပါက USB cable ကို, သို့မဟုတ် charging ဆဲလ်ဖုန်းကိုသုံးပါ, လွယ်ကူပြီးရိုးရှင်းတဲ့.
ငါသည်သင်တို့၏ထုတ်ကုန် iCopy3 စမတ်ကဒ်မိတ္တူစက်ကိုစိတ်ဝင်စားမိပါတယ်, iCopy3 IC / ID ကိုကတ်ဓါတ်လှေကား Card ကို Clone စက်ပစ္စည်း
prev: အပြည့်အဝကြိမ်နှုန်း ID ကိုနံပါတ် Copy ကူးစက်, 125kHz 250KHz 375KHz 500KHz 13.56MHz
နောက်တစ်ခု: EM4305, EM4205, HITAG_2, RF256 စီးရီး Chip Tag ကို Password ကိုစမ်းသပ်စက်, HITAG_2 Chip ပဲစင်းငုံ Foot Ring ကို Password ကိုစမ်းသပ်စက်